ထိပ်တန်း5ဥရောပတွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5ဥရောပတွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/11/2020)
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ. ထိုကွောငျ့, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာအချို့သည်ဥရောပနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
အထွတ်အထိပ်နာရီမှာလူစည်ကားခံရနေသော်လည်း, ထိပ်5ဥရောပရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာသည်သင်ခရီးသွားရာတွင်သင်လိုအပ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.
ဥရောပကိုသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကိုလေ့လာပြီးဥရောပမှာအလုပ်အများဆုံးမီးရထားဘူတာကဘာလဲ. Vivaldi ကိုဘယ်မှာနားထောင်နိုင်မလဲ၊ အီတလီရထားထွက်ခွာရန်မည်သည့်ရထားဘူတာတွင်မြစ်ကမ်းနား၌သင်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်ကိုသင်ရှာဖွေတော့မည်။.
1. Gare Du Nord ရထားဘူတာ, ပဲရစ်
ပဲရစ်မှာရှိတဲ့ Gare du Nord (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် Gare ဟူသောစကားလုံးသည်ရထားဘူတာဖြစ်သည်, ပြင်သစ်တွင် Nord သည်မြောက်ဖြစ်သည်) ဥရောပမှာအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ. အဲဒီမှာနီးစပ်သူရှိပါတယ် 700,000 နေ့စဉ်ဘူတာရုံကိုဖြတ်သန်းသောခရီးသည်များ. ရထားဘူတာရုံသည်အနီးအနားတွင်တည်ရှိသည် 10ကြိမ်မြောက် ပဲရစ်၏မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ arrondissement, ဒီတော့ခရီးသည်အများစုဟာပါရီလူမျိုးတွေပါ. သာ 3% ရထားရဲ့ခရီးသည်များ၏အားဖြင့်ဗြိတိန်မှသို့မဟုတ်မှရောက်ရှိလာသောခရီးသွား are ည့်ဖြစ်ကြသည် Eurostar ရထား.
ဥရောပရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်3နှစ်ပေါင်း, အကြား 1861 နှင့် 1864. အဆိုပါဗိသုကာဒီဇိုင်း9ရထားဘူတာအတွင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုအလှဆင်သောအံ့ဖွယ်ရုပ်ထုများ 23 ရုပ်ပွားတော်ဘူတာရုံရဲ့မျက်နှာစာအပေါ်အလှဆင်. ရုပ်ပွားတော်များသည်ပါရီနှင့်ဆက်သွယ်သောအဓိကဥရောပမြို့များကိုကိုယ်စားပြုသည်.
Paris-Nord သည်ပြင်သစ်မြောက်ပိုင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများသို့သွားရန်ရထားဘူတာဖြစ်သည်, ဥပမာ, ဂျာမနီ, လန်ဒန်, နှင့်အမ်စတာဒမ်. ထို့ကြောင့်, ဒီအလုပ်များတဲ့ရထားဘူတာဟာမင်းအတွက်သင့်အတွက်ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုပေးလိမ့်မယ် ပြင်သစ်တွင်အားလပ်ရက်. ဆိုင်တွေရှိတယ်, ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်စင်တာ, ကော်ဖီဆိုင်များ, သင်၏ရထားမထွက်ခွာမီနာရီအနည်းငယ်အလိုတွင်ပဲရစ်ကိုအဆင်ပြေစွာလေ့လာလိုပါကခရီးဆောင်အိတ်များ.
2. ဟမ်းဘတ်ဗဟိုဘူတာရုံ, ဂျာမနီ
ထက်ပိုပြီး 500,000 ခရီးသည် Hamburg Hbf ကိုဖြတ်သန်း (Hbf သည်ဗဟိုဘူတာသို့ဘာသာပြန်သော Hauptbahnhof သို့ဖြတ်လမ်းဖြစ်သည်) ဂျာမနီရှိဘူတာရုံ. ထို့ကြောင့်, ဥရောပတိုက်တွင်ဒုတိယမြောက်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာဖြစ်သည်.
ရထားဘူတာရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်4နှစ်များနှင့် Heinrich Reinhardt နှင့် Georg Subenguth တို့သည်၎င်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ကြသည်. ရထားဘူတာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 1906 နှင့် 1991 စျေးဝယ်စင်တာကိုမြောက်ပိုင်းတံတားတွင်ထည့်ခဲ့သည်, စားသောက်ဆိုင်တွေဘယ်မှာလဲ, kiosk, ဆေးဆိုင်, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ.
သင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် မီးရထားခရီးသွားလာ ဂျာမနီသို့, သင်ဂန္ထဝင်ဂီတကိုခံစားနိုင်သည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျနောက်ဆုံးမိနစ်အမှတ်တရပစ္စည်းများအဘို့အစျေးဝယ်နေစဉ်, အခြေခံလိုအပ်ချက်များ, နှင့်အစာစားရန်ကိုက်ဖမ်းဆုပ်, သငျသညျ Vivaldi ရဲ့ Four Seasons နားထောင်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်ကြိုဆိုကြသည်.
3. ဇူးရစ် HB ဗဟိုမီးရထားဘူတာ, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန်၏အကြီးဆုံးမီးရထားဘူတာသည်ဇူးရစ်တွင်ရှိသည်. ဇူးရစ် HB (HB သည် Hbf နှင့်တူပြီး Hauptbahnhof = Central Station ကိုဆိုလိုသည်) ရထားဘူတာသည်ဥရောပရှိအလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်. အလုပ်များနေသောဆွစ်ဇာလန်ရထားဘူတာသည်ဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်. ရှိပါတယ် 13 ပလက်ဖောင်းများနှင့် 2,915 ရထားတွေဂျာမနီကိုထွက်ခွာ, အီတလီ, ပြင်သစ်, နှင့်သြစတြီးယားနေ့စဉ်. ထိုကွောငျ့, ဇူးရစ်ရထားဘူတာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒီရထားဘူတာကိုဥရောပမှာအလုပ်အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တကယ့်ကိုစည်ကားနေတယ် & ဘူတာရုံအတွင်းရှိမြို့ဘဝ. ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏ခရီးသွားသည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍, သင် ... နိုင်သည် ခရစ်စမတ်စျေးကွက်ကိုနှစ်သက်သည် and street parades.
ဇူးရစ်ရထားဘူတာသည်ဇူးရစ်မြို့ဟောင်းတွင်တည်ရှိသည်. အဆိုပါ ဆစ်မြစ် ဘူတာရုံကိုဖြတ်သန်းပါတယ်, ဆိုလိုသည်မှာရထားလမ်း၏အောက်နှင့်အောက်တွင်ရထားလမ်းရှိသည်.
လည်း, ဇူးရစ်ရထားဘူတာသည်ဆွစ်ဇာလန်ကိုပြင်သစ်နှင့်ဆက်သွယ်သည်, ဂျာမနီ, အီတလီ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, နှင့်သြစတြီးယား.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းရှိအခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားဘူတာနှင့်ဆင်တူသည်, အဲဒီမှာ ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးရုံး, လက်မှတ်ရုံ, ခရီးဆောင်အိတ်များ, ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်စင်တာ, နှင့်ဇူးရစ်ရထားဘူတာတွင် Wi-Fi ကိုအင်တာနက်. ဒါကြောင့်, အမှု၌သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုထုပ်ပိုးရန်မေ့လျော့ကြ၏ ဆွစ်ဇာလန်၌အားလပ်ရက်, ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘူတာရုံမှာသင်အရာအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်.
4. ရောမမြို့ Termini ရထားဘူတာ, အီတလီ
ရောမရထားဘူတာရုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်ကိုပါရှိပါတယ်5ဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာသည်နှစ်စဉ်ခရီးသည်အရေအတွက်ထူးကဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်. အထိ 150 နှစ်စဉ်ခရီးသည်သန်းသန်းသည်အလုပ်များသည့်ရထားဘူတာကိုရောက်လာပြီးထွက်ခွာသွားသည်.
ရောမရထားဘူတာသည်ရောမတာမင်နီကိုအီတလီရှိအခြားမြို့များနှင့်ဆက်သွယ်သည် Trenitalia. ဖြည့်စွက်ကာ, ရထားလမ်းသည်အီတလီကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်သွယ်သည် 29 ပလက်ဖောင်း. ဥပမာ, ရောမ Termini ကနေ, သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဂျီနီဗာမြို့သို့သွားနိုင်သည်, ဂျာမနီရှိမြူးနစ်, နှင့်သြစတြီးယားရှိဗီယင်နာ.
ရောမရထားဘူတာတွင်ဥရောပသို့မဟုတ်အီတလီသို့ခရီးသွားလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးရှိသည်. ထိုကွောငျ့, ဝင်ပေါက်ခန်းမမှာ, သငျသညျငွေကြေးလဲလှယ်ရုံးတွေ့လိမ့်မည်, စားသောက်ဆိုင်, တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုများ, နှင့် ခရီးဆောင်အိတ်များ. အရာအားလုံးကိုစီစဉ်ထားပြီးသင်၏ခရီးများကိုတတ်နိုင်သမျှချောချောမွေ့မွေ့သွားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.
5. မြူးနစ် Hauptbahnhof ရထားဘူတာ, ဂျာမနီ
ဒီနေ့ရှိပါတယ် 32 ဥရောပရှိအလုပ်များဆုံးရထားဘူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဂျာမနီနိုင်ငံများအနက် InterCity နှင့် EuroCity ရထားဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်, နှင့်အီတလီ, ပြင်သစ်, ဆွစ်ဇာလန်, နှင့်သြစတြီးယား. Munchen Hauptbahnhof ရထားဘူတာမှသင်ဘာလင်သို့သွားနိုင်သည်, Frankfurt, ဂျာမနီရှိဗီယင်နာသို့မဟုတ်အီတလီရှိဗင်းနစ်နှင့်ရောမမြို့သို့ရထားစီးပါ, ပဲရစ်, နှင့်ဇူးရစ်.
လှည့်ပတ် 127 နှစ်စဉ်ခရီးသည်သန်းပေါင်းများစွာသည်မြူးနစ်ရထားဘူတာသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအခြားဘူတာရုံများနှင့်ဆင်တူသည်, မြူးနစ်မီးရထားဘူတာသည်ခရီးသွားများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများစွာပေးသည်. ဥပမာအားဖြင့်, မင်းအစားအစာဆိုင်တွေရှာတွေ့နိုင်တယ်, လက်ဆောင်ဆိုင်များ, ကလေးတစ်ယောက်တောင်မှ & ဘူတာရုံရှိလူငယ်ပြတိုက်.
ဘူတာရုံအပြင်ဘက်, သငျသညျ U-Bahn မြေအောက်မက်ထရိုတွေ့လိမ့်မည်, တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုများ, မြူးနစ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ပို့ဆောင်မည့်လမ်းရထားများဖြစ်သည်.
သင်ဥရောပကိုဖြတ်ပြီးသွားရန်ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာရထားကိုရှာနေသည်မလား, သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုမှာလိုက်ပါ တစ်ဦးကရထား Save. အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုသင်တွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း5ဥရောပတွင်အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
BusiestTrainStations ဘူတာရုံ ချစ်သူ ဟုတ်ပါတယ် ချစ်သူ